Soomaaliya oo dib u martigalin doonta ciyaaro heer caalami | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Soomaaliya oo dib u martigalin doonta ciyaaro heer caalami
Soomaaliya oo dib u martigalin doonta ciyaaro heer caalami
Muqdisho ( XT) – Xiriirka kubbadda Soomaaliya ayaa iclaamiyay qorsheyaal ay ku marti-galinayaan ciyaaro heer caalami bilawga sanadka danbe, markii amniga dalka uu soo hagaagay sidaas waxaa sheegay madaxa xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya.
Cabdiqani Siciid Carab madaxa xiriirka kubbadda cagta ee Soomaaliya ayaa yiri “ Waxaa la joogaa xilligii Soomaaliya ay marti-galin laheyd ciyaaro kuwaas oo dhici doona garoomada kubbadda ee dalka sanadka 2018”
“Amniga soo hagaagay awadeed Soomaaliya waxay go,aansatay in ay martigaliso wadamo kale oo ay ku ciyaarto ciyaaro heer caalami dalka gudihiisa” sidaas waxaa yiri Cabdiqani Siciid Cara boo hadalkiisa sii wata.
Soomaaliya ayaa marti-galisay ciyaartii ugu danbeeysay ee heer caalami sanadkii 1988dii.Intaas wixii ka danbeeyay xulka Soomaaliya marnaba ciyaar kuma ciyaarin gudaha oo waxay ku qasbanaayeen in ay wadamo kale ku ciyaaraan taas oo dhaxalsiiyay dhibaatooyin badan.
In Soomaaliya ay niyada galiso marti-galinta ayaa waxaa soo dadajiyay booqashadii madaxweynaha xiriirka kubbada cagta Afrika Axmed Axmed oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho bishii Abril ee sanadkaan.
Kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa soo martay xaaladaha adag iyada hadda sameysay hormar ballaaran, marka la eego sida loo qalabeeyay garoomo badan oo u diyaar ah martgalinta ciyaaro heer caalami.
Previous articleTunisia suspends Emirates Airlines flights
Next articleGuddoomiye Jawaari iyo wafdi uu Hoggaaminayo oo gaaray Baydhabo